Dargaggoo sibiloota hojiin ala ta’aaniirraa meeshaa waraanaa rasaasa 40 fudhatu hojjete – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Dargaggoo sibiloota hojiin ala ta’aaniirraa meeshaa waraanaa rasaasa 40 fudhatu hojjete
On Dec 28, 2021 233
Finfinnee, Muddee 19, 2014 (FBC)- Dargaggoon Abinnat Wadaaj jedhamu umrii waggaa 18 kan ta’ee jiraataa magaalaa Goondar yoo ta’u, daa’imummaa isaarra eegalee meeshalee hojiin ala ta’aanirra hojii kalaqaa adda addaa hojjetaa tureera.
Dargaggoon kun baandoota keessaa fi alaatin waraanaa biyyattirratti banamee ittisuuf meeshaan waraanaa barbachiisaadha jechuun sibiloota hojiin ala ta’aan irraa meeshaa waraanaa rasaasa 40 fudhatuu hojjechuun ‘Chichii’ jechuun moggaseera.
Adda waraanaa Zaarimaatti argamuunis yaalii taasisuu ibsameera.
Kana duras Shugguxii hojjechuun yaalii milka’aa taasisuun isaa himameera.
Barnootasa kutaa 7ffaatti addaan kutun itti fufuu kan hin dandeenye dargaggoon kun, ofi isaan akka of bulchuu fi maatiisa akka deeggaruu Faanaa Broodkaasting Koorporeetiif ibseera.
Deeggarsa kan naaf taasisuu yoon argadhee kana caalaa hojjechuun nan danda’aa jedha dargaggeessi kun.
Salaam Asmalaashtu gabaase
Bulchiinsi magaalichaa halluu Gamoowwanii ilaalchisee ibsa laate
Abbaa ijoollee 11 fi maanguddoo umrii waggaa 69 Yuunvarsiitiin Jimmaa haaraa simate…
Awurooppaatti furdinni hammaan ol ta’e sadarkaa yaaddessaarra ga’uu ifoome
Akka falaasamaa fi duudhaa Oromootti Odaan bakka Waaqni hariiroosaa nama wajjiin itti…
Bulchiinsi magaalichaa halluu Gamoowwanii ilaalchisee ibsa…
Abbaa ijoollee 11 fi maanguddoo umrii waggaa 69…
Awurooppaatti furdinni hammaan ol ta’e sadarkaa…